Indlela Yokuqeda Ama-Blackheads Ngokuphepha: Amathiphu we-Dermatologist ayi-13 - Ubuhle
Indlela Yokuqeda Ama-Blackheads Ngendlela Efanele
Uma ungeke ukwazi ukumelana nokucindezela, lokhu kungokwakho.
isibeletho ngesikhathi vs evamile
Ngokuhambisana nokuthi kungani uthole ama-bangs nokuthi yini inqubo yokunakekelwa kwesikhumba kaJ.Lo, ukuthi ungasusa kanjani ama-blackheads kungenye yezimfihlakalo ezinkulu zokuphila. Kuhle-mhlawumbe akuyona imfihlakalo kangako njengenselelo. Ungazama ukuwakhipha, kepha uzibeka engcupheni yokulimaza isikhumba sakho ngendlela eyenza ukuthi i-blackhead oyisusile ibonakale njenge-NBD (think scarring or hyperpigmentation). Ngenhlanhla kunendawo ethile emaphakathi ekususeni nasekuvimbeleni amakhanda amnyama. Sibize ochwepheshe ukuthi bathole lesi sikole.
Okokuqala, kuyasiza ukwazi ukuthi yini ebangela amakhanda amnyama. (Njengoba uSun Tzu esho, yazi isitha sakho.) AmaBlackheads akha lapho ukuvulwa kwepore esikhunjeni sakho kugcwele i-sebum, kusho UDeanne Mraz Robinson, MD , udokotela wesikhumba eWestport, eConnecticut. Amaseli wesikhumba afile kanye namafutha aqoqa ku-pore. Futhi uma i-pore ingamboziwe ngesikhumba, ukuvezwa komoya kubangela ukuthi iguquke ibe mnyama njengoba ixhuma oksijini. Ngakho-ke igama umnyama.
Ukufunda ukukhipha amakhanda amnyama kungaba ngumshintshi womdlalo, ngoba bayakwazi ukunamathela lapho beshiywe bengavunyelwe. Amanye ama-blackheads angaqhubeka izinsuku, amasonto, noma ngisho nezinyanga uma engakhishiwe, ngenkathi umzimba wakho uvame ukusula amhlophe amhlophe kungakapheli isonto kuye ezinsukwini eziyishumi, kusho udokotela wesikhumba ULaurel Geraghty, MD Lokhu kulungiswa kwesimiso sakho sokunakekelwa kwesikhumba kungasiza.
1. Geza ngesihlanza esimnene.
Melana nesilingo sokuqalisa ukuhlaselwa ngamakhanda akho amnyama. Eqinisweni, ukubheja kwakho okuhle ukusebenzisa ukuhlanza okuncane. Ngeke isiphuce ngokweqile isikhumba sakho somswakama, esingadala ukukhiqizwa ngokweqile kwe-sebum futhi siqhubekise inkinga, kusho uRobinson. Ungumuntu othanda ukuhlanza aqukethe i-glycolic acid, ekhipha izimbotshana. Zama inketho efana I-SkinCeuticals i-LHA Cleanser Gel , othi, ushada i-glycolic acid ne-salicylic acid ne-glycerin ne-sorbitol, esebenza njengama-humectants futhi isize isikhumba sakho sigcine umswakama. Win-win.
ICeraVe Hydrating Facial Cleanser
$ 15 ICerava Thenga Manje
I-SkinCeuticals i-LHA Cleanser Gel
$ 41 SkinCeuticals Thenga Manje
2. Bamba ubuso bakho.
Ngaphambi kokuba uzame ukukhipha ekhaya, kubalulekile ukukhulula nokuthambisa imfucumfucu ebhajwe kuma-pores akho ngokushisa okuthile. I-face steamer iyindlela enhle yokwenza lokhu, kepha uma ungenayo, usaziwayo oyisazi URenée Rouleau inohlelo oluzosebenza ku-pinch. Qala ngokugeza noma ugeze ubuso, bese ufaka ungqimba oluncane lwesithambisi esinzima kunazo zonke endaweni ongayikhipha. I-Moisturizer izokwakha uphawu lwesikhashana lokugcina ukushisa kubhajwe esikhunjeni sakho, okwenza ukukhishwa kube lula kakhulu, kusho uRouleau.
Bese umboza indawo ngokugoqwa ngepulasitiki, bese ugcoba indwangu yokuwasha eshisayo, emanzi, uphinde ubeke enye ngaphezulu. Ukubeka izindwangu zokugeza kuzoqinisekisa ukuthi ukushisa kuyagcinwa esikhunjeni sakho, usho kanje. Ngokukhishwa okuphephile nokususwa okulula, kubalulekile ukuthi isikhumba sakho sithambe ngangokunokwenzeka. Ngemuva kwemizuzu embalwa, susa izindwangu noplastiki, bese ufaka olunye ungqimba lwesithambisi ukugcina isikhumba sakho simanzi ngaphambi kokuya kokukhishwayo.
I-Lonove Facam Steamer
$ 30 I-Amazon Thenga Manje
UDkt Dennis Gross Pro Steamer ebusweni
$ 149 UDkt Dennis Gross Thenga Manje
3. Uma kufanele ukhame, ungalokothi usebenzise izinzipho zakho.
Uma ukhipha ngeminwe yakho, okusemqoka ukuthi ube mnene, kusho uGeraghty. Nsuku zonke ngibona iziguli ezikha, ziklwebhe, futhi zikhiphe amabala esikhunjeni, futhi lokhu kuzibeka engcupheni yokuthola izibazi unomphela.
Nayi into yokuqala: Qala ngezandla ezihlanzeke ngokuphelele futhi ukhumbule ukungayibeki iminwe yakho eduze kakhulu ne-blackhead. Yenabe kancane ukuze i-blackhead ikhishwe kalula ezingeni elijulile ngaphakathi kwesikhumba sakho, kusho uRouleau. Ngenkathi ucindezela, hambisa iminwe yakho ukwenza kube lula nokugwema ukudala amamaki. Isibonelo, beka iminwe ngehora lesithathu nelesishiyagalolunye, bese kuthi ngehora lesihlanu nangeleshumi, bese kuba ngelesibili nangelesikhombisa, usho njalo. Ingabe hhayi sebenzisa izinzipho zakho, funa ubhoboze isikhumba sakho.
4. Okungcono nokho, sebenzisa ithuluzi lokukhipha.
Ithuluzi lokukhipha lisetshenziswa ehhovisi ngabaningi bezobuciko, ngakho-ke uma uzama ukuphindaphinda ubuso bakho obuthandayo, ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Ukuze uyisebenzise kahle, beka amathiphu avulekile ohlangothini ngalunye lwe-blackhead. URouleau uthi ukugcina umzimba we-tweezer ubheke lapho ukhipha khona, futhi ugcine ingxenye egobile yamathiphu esikhunjeni sakho. Cindezela ngomusa ohlangothini ngalunye lwekhanda elimnyama lize liqale ukukhipha, esho. Faka ingcindezi ehamba kancane futhi ngisho, futhi uma ukwazi, ncinda kancane udlawana bese ukhipha okomnyama esikhunjeni ukuze uyikhiphe. Uma i-blackhead ingakhiphi kalula, ungaqhubeki nokuzama ukukhipha.
Uma usuqedile, sula ngobumnene isikhumba sakho nge-antibacterial, toner engenalo utshwala njengaye I-Rapid Response Detox Toner .
Ithuluzi le-Beauté Galleria Premium Lensimbi Engagqwali Eligobile
$ 6 I-Amazon Thenga Manje
URenée Rapid Response Detox Toner Roller
$ 42 URenée Rouleau Thenga Manje
5. Khipha ioli njalo.
Ukuze ukhishwe, khetha ama-acid. Ngikhetha kakhulu ama-exfoliants amakhemikhali kunalawo aphathekayo, okusho ukuphendukela kuma-peels amakhemikhali futhi i-alpha hydroxy acids Ukuqhathanisa nokukhuhla, kusho uRobinson. Ukukhuhla kungadala ama-microtears esikhunjeni sakho. Bheka izithako ezifana ne-glycolic acid, i-lactic acid, ne-salicylic acid.
abesifazane baxegise amahembe afanelekile
Ngokuqondile, uRobinson uthanda i-salicylic acid, engangena shí ngaphakathi kwepore yakho futhi ichithe i-sebum edala ukuvaleka. Kugcina izimbotshana zivulekile futhi zihlanzekile, usho njalo. Siyathanda I-BeautyRx Skincare Dermstick yamaPore , ngoba ungayisebenzisa ukukhipha izindawo ezincane, ezinamakhanda amnyama njengekhala lakho.
Usizo Lokuqala FAB Pharma White Clay Acne Treatment Pads 2% Salicylic Acid
$ 30 Ubuhle Bosizo Lokuqala Thenga Manje
UBeautyRx nguDkt Schultz Dermstick Pore Minimizer
$ 29 I-Amazon Thenga Manje
6. Sebenzisa umucu wepore.
I-oldie kodwa i-goodie, lezi zisiza ukuqeda ama-blackheads ngendlela eyisisekelo: ngokuwukhipha. Empeleni ukubeka iBand-Aid emakhaleni akho, kusho uRobinson. Ngakho-ke uma isikhumba sakho sifakwe ngokwanele ngamanzi afudumele futhi i-pore ivulekile, ukuncela ekususeni umucu kuzonyusa imfucumfucu ebhajwe ngaphezulu. Lokho kusho, abaphathi kahle ama-blackheads; basusa nje ingxenye engaphezulu (futhi ebonakalayo). I-Bioré Charcoal Deep Cleansing Pore Strips ngababili abasusa amandla ngamalahle, anezakhi zokuxosha ubuthi.
I-Bioré Deep Cleansing Charcoal Pore Strips
$ 17 Biore Thenga Manje
7. Qinisekisa ukuthi uthambisa.
Noma uwoyela unikela ngamakhanda amnyama, ukuwagwema kuzobuyela emuva. Eqinisweni, ukugcina amazinga kawoyela esikhumba sakho elingana (uma kuqhathaniswa nokungabikho) kuyisihluthulelo sokunciphisa amakhanda amnyama. Ngenkathi amanye amafutha anzima, njengamafutha we-avocado, angavala ama-pores akho, ukungabi khona kukawoyela kubangela isikhumba sakho ukuthi sikhiqize amanye-okuholela ekuqageleni, ukuqhuma okuningi.
Isikhumba esomile ngokweqile singaqala ukukhiqiza uwoyela owedlula wonke odala ikhanda elimnyama, kusho usosayensi odumile wase-New York City UChristine Chin . Qinisekisa ukuthi ugcina ukugeleza okuvamile kukawoyela kusuka kuma-pores akho ngokugcina izinga lomswakama wesikhumba sakho lilinganise. Zama i-moisturizer ngamafutha we-squalane, esebenza njenge-emollient kepha ayinayo i-noncomogenic-ingcono kunayo yonke imihlaba.
I-Biossance Squalane + i-Omega yokulungisa ukhilimu
$ 58 I-Biossance Thenga Manje
Intsha ku-People Adaptogen Deep Moisture Cream nge-Ashwagandha + Reishi
$ 58 Intsha Kubantu Thenga Manje
8. Faka i-retinoid yama-topical.
I-Geraghty incoma ukusebenzisa i-retinoid yama-topical, njengokhilimu we-tretinoin cream noma i-counter-the-counter I-Differin Adapalene Gel 0.1% Ukwelashwa Kwezinduna . Ama-retinoid awanakuqhathaniswa ekukwazini kwawo ukukhuthaza inzuzo yamaseli, asuse amangqamuzana esikhumba afile futhi anciphise namathuba okubumba okuvalekile. Isendlalelo esincane kakhulu esisetshenziswe ngesikhathi sokulala singasiza ukukhipha isikhumba sakho, ukuvala izimbotshana, ukunciphisa ukugcwala, nokususa nokuvimbela ama-blackheads amancane namhlophe.
I-Differin Acne Treatment Gel
Ama-retinoids yizona zindlela ezingcono kakhulu zokushintsha ukuthungwa nokuguqulwa kombala ngenduna, futhi enza umsebenzi ophindwe kabili njenge-antiacne kanye nokulwa nokuguga. Lena i-retinoid enhle yokuthenga ekwehliseni ukuvuvukala nokuvaleka kwezinduna ezisebenzayo. - Mxolisi Mbethe $ 29 I-Differin Thenga Manje
9. Zama amanye amagajethi.
Uma iminwe yakho inganele ukukhipha i-blackhead ngokuphepha, kunamathuluzi ambalwa okufanele akwenze kube lula. UMona Gohara, M.D ., udokotela wesikhumba e-Connecticut, uncoma umakhi wensimbi we-comedone, ngoba yilokho akusebenzisayo ehhovisi. Singabalandeli abakhulu bama-spatula esikhumba adlidlizelayo ukusiza ukuvubukula ama-pores akho.
Utopia Care Blackhead kanye neBlemish Remover
$ 5 I-Amazon Thenga Manje
I-Dermaflash Dermapore Ultrasonic Pore Extractor
$ 99 Dermaflash Thenga Manje
Kukhona nezinciphisi zepore, ezimunca ngokoqobo imfucumfucu esikhunjeni sakho. Kepha kufanelekile ukwenza ucwaningo ngaphambi kokusebenzisa eyodwa, ngoba kwesinye isikhathi bangaba namandla kakhulu futhi benze okubi kunokuhle. UGohara uthanda ukuthanda Lonove cleaner njengoba ine ukuncela mnene futhi ukukhanya okwesibhakabhaka ukuzola ukuvuvukala.
Izingubo zomshado zasehlobo zase-2021
Kodwa-ke, uma unesikhumba esijulile, kufanele ukuthi wenze iphutha ohlangothini lokuqapha. Labo bethu abanesikhumba esinsundu banokuthambekela okuningi ekubhekaneni ne-hyperpigmentation ngezinqubo, kusho uGohara. Ngincoma ukuhlala kude nokudonswa nokunamathela ngezindlela ezimnene njengokukhishwa kwesitimu ukugwema ukuhlukumezeka kwesikhumba.
I-Lonove Blue Light Blackhead Vacuum Pore Yokuhlanza
$ 26 I-Amazon Thenga Manje
10. Sebenzisa uvithamini C
Impela, izithako ezifana ne-beta hydroxy acids ne-benzoyl peroxide zisebenza kahle kuma-acne nakuma-pores avalekile. Kepha isithako sakho osithandayo esikhanyayo, uvithamini C, empeleni singaba namandla amakhulu ngokususa amakhanda amnyama. I-blackhead kumane kunguwoyela osekuvele ukuthi wavela futhi wahlanganiswa namanzi ngenxa yokuxhumana nomoya ovulekile, kusho uRouleau. Le-oxidation yiyo eyenza ukuthi ama-blackheads aguquke abe mnyama. Ukulwa nale nqubo nokugcina uwoyela ungangeni ngokushesha okukhulu, sebenzisa i-antioxidant efana no-vitamin C.
Uyaphawula ukuthi kubalulekile ukusebenzisa ifomu elizinzile likavithamini C, ngoba amafomu angazinzile angaxhuma ngokushesha futhi abangele amakhanda amnyama amaningi. (Bheka okuningi kufayela le- ama-serum ama-vitamin C amahle kakhulu ukuthenga.)
URenée Rouleau Vitamin C & E Ukwelashwa
$ 69 URenée Rouleau Thenga Manje
11. Funda ukuthi uyidedela nini inhloko emnyama enenkani.
Kufanele ukhombe kuphela amnyama amnyama, asobala kusuka ekuqaleni. Kepha uma elinye lalawo makhanda amnyama angaveli, thatha umoya ojulile futhi kube njalo. Umthetho wami ojwayelekile iziteleka ezintathu futhi uphumile, kusho uRouleau. Okusho ukuthi, uma ingaphumi ngemuva kokuzama kathathu, ungabe usayenza noma uzobeka engcupheni yokulimaza isikhumba sakho noma okungenzeka wephule i-capillary. Uma kungaphumi, lokho kusho ukuthi akusona isikhathi sokuyisusa. Ungavele ubuyele kuyo ngolunye usuku. Kungcono kunokubangela umonakalo.
Kukhona futhi, kunjalo, ithuba lokuthi lokho wena cabanga i-blackhead kungenzeka ingabi yi-blackhead nhlobo. UGeraghty uveza ukuthi ama-cysts ajulile noma ama-milia angazenza amakhanda amnyama, futhi zombili zidinga ukuvakashelwa kudokotela wesikhumba ngoba zombili zidinga okungaphezu kokukhishwa okulula.
12. Zama iHydraFacial.
Uma ulwa nobumnyama obumnyama njalo, uGohara uncoma ukuthi uzame i I-HydraFacial , ehlanganisa ukudonsa okuncane ukuze kususwe imfucumfucu ebanjiwe bese ifaka isikhumba emswakeni — yicabange njengobuso obuminyene. Le yindlela enhle yokugcina ama-pores ahlanzekile ngaphandle kokuhlubula ngokweqile isikhumba sakho somswakama, kusho uRobinson.
13. Bheka onguchwepheshe.
Kwesinye isikhathi kungcono ukuvumela uchwepheshe ukuthi ayiphathe. Uma kuwumzabalazo wokukhipha amakhanda amnyama futhi ungayitholi imiphumela, nakanjani bheka ipro pro, kusho uRouleau.
Kuphephe kakhulu ukubona udokotela oqeqeshwe kahle wase-esthetician noma udokotela wesikhumba okwazi ukwenza ukukhishwa emahhovisi noma i-microdermabrasion, kusho uGeraghty. I-Microdermabrasion yindlela yokwelapha ethambisa kalula evame ukufaka ipeni noma induku encane esebenza njenge-sandblaster encane ne-vacuum cleaner kokukodwa.
Ukubika okungeziwe kuka-Emily Rekstis noBella Cacciatore
izipho okunzima ukuzithenga
indlela yokusiza izinwele zakho zikhule ngokushesha
i-mascara enhle kakhulu yamehlo azwelayo ngo-2016
selena gomez justin bieber izithombe zomshado
ikuphi kanye kanye manje